6 Zvino guta reJeriko rakanga rakavharwa zvakasimba nokuda kwevanakomana vaIsraeri, pasina aibuda uye pasina aipinda.+ 2 Jehovha akati kuna Joshua: “Ona, ndaisa muruoko rwako+ Jeriko namambo waro, nevarume vane simba vakashinga. 3 Imi mose varume vehondo munofanira kufora muchitenderera guta, muchipoterera guta racho kamwe. Ndizvo zvamunofanira kuita kwemazuva matanhatu. 4 Vapristi vanomwe vanofanira kutakura hwamanda nomwe dzenyanga dzemakondohwe, vari pamberi peAreka, uye pazuva rechinomwe munofanira kufora muchitenderera guta kanomwe uye vapristi vanofanira kuridza hwamanda.+ 5 Pavanoridza nyanga yegondohwe, pamunonzwa kurira kwehwamanda, vanhu vose vanofanira kushevedzera kwazvo nokuda kwehondo;+ uye rusvingo rweguta racho ruchakoromoka rwose,+ uye vanhu vanofanira kupinda, mumwe nomumwe paanenge akanangana napo.” 6 Naizvozvo Joshua mwanakomana waNuni akashevedza vapristi+ akati kwavari: “Simudzai Areka yesungano,+ uye vapristi vanomwe ngavatakure hwamanda nomwe dzenyanga dzemakondohwe vari pamberi peareka+ yaJehovha.” 7 Uye akati kuvanhu: “Pfuurai mufore muchitenderera guta racho, uye uto rakagadzirira kurwa+ ngariende pamberi peareka yaJehovha.” 8 Naizvozvo zvakaitika sokuudzwa kwakanga kwaitwa vanhu naJoshua; uye vapristi vanomwe vakanga vakatakura hwamanda nomwe dzenyanga dzemakondohwe vakaenda mberi, vakaridza hwamanda dzacho pamberi paJehovha, uye areka yesungano yaJehovha yakanga ichivatevera. 9 Uto rakanga rakagadzirira kurwa rakanga richifamba riri pamberi pevapristi vairidza hwamanda, varindi veshure+ pavakanga vachitevera Areka hwamanda dzichingoridzwa. 10 Zvino Joshua akanga arayira vanhu,+ achiti: “Musashevedzera kana kuita kuti manzwi enyu anzwike, uye ngaparege kuva neshoko rinobuda mumiromo yenyu kusvikira zuva randinoti kwamuri, ‘Shevedzerai!’ Imi mubve mashevedzera.”+ 11 Iye akaita kuti areka yaJehovha ifore ichitenderera guta racho, ichipoterera kamwe chete, vachibva vazoenda kumusasa, vakarara mumusasa. 12 Joshua akabva afumomuka,+ vapristi vakatakura areka+ yaJehovha, 13 uye vapristi vanomwe vakanga vakatakura hwamanda nomwe dzenyanga dzemakondohwe vari pamberi peareka yaJehovha, vaifamba vachingoridza hwamanda, uye uto rakanga rakagadzirira kurwa rakanga richifamba riri pamberi pavo, varindi veshure pavakanga vachitevera areka yaJehovha hwamanda dzichingoridzwa.+ 14 Vakafora vachitenderera guta racho pazuva rechipiri kamwe chete, vachibva vazodzokera kumusasa. Ndizvo zvavakaita kwemazuva matanhatu.+ 15 Zvino pazuva rechinomwe vakafumomuka, utonga huchangotsvuka, vakafora vachitenderera guta saizvozvi kanomwe. Pazuva iroro roga vakafora vachitenderera guta racho kanomwe.+ 16 Panguva yechinomwe vapristi vakaridza hwamanda, Joshua akati kuvanhu: “Shevedzerai;+ nokuti Jehovha akupai guta.+ 17 Guta racho ngarive chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe;+ iro nezvinhu zvose zviri mariri ndezvaJehovha. Rakabhi+ oga, pfambi iya, ngaarambe achirarama, iye navose vaainavo mumba, nokuti akavanza nhume dzatakatuma.+ 18 Asi imi regai chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe,+ kuti murege kuchida,+ mukatora chimwe chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe,+ mukaita kuti musasa waIsraeri uve chinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe, mukauunzira dambudziko.+ 19 Asi sirivha yose nendarama nezvinhu zvemhangura nesimbi, zvinhu zvitsvene kuna Jehovha.+ Zvinofanira kuenda kupfuma yaJehovha.”+ 20 Vanhu vakabva vashevedzera, pavakaridza hwamanda.+ Uye vanhu pavakangonzwa kurira kwehwamanda vakatanga kushevedzera kwazvo nokuda kwehondo, masvingo akabva atanga kukoromoka kusvika pasi.+ Vanhu vakazopinda muguta, mumwe nomumwe paakanga akanangana napo, vakatora guta racho. 21 Vakatsaura zvose zvakanga zviri muguta racho, kubvira kumurume kusvikira kumukadzi, kubvira kujaya kusvikira kune akwegura uye kusvikira kunzombe nemakwai nembongoro, kuti zviparadzwe nomuromo webakatwa.+ 22 Joshua akati kuvarume vaviri vakanga vasora nyika yacho: “Pindai muimba yomukadzi, pfambi iya, mubudise imomo mukadzi wacho nevanhu vose vaainavo, sezvamakamupikira.”+ 23 Naizvozvo varume vakanga vasora nyika vakapinda, vakabudisa Rakabhi nababa vake naamai vake nehanzvadzi dzake nevanhu vose vaaiva navo, chokwadi vakabudisa hama dzose dzemhuri yake;+ vakavagarisa pasi kunze kwomusasa waIsraeri. 24 Vakapisa guta racho nomoto nezvinhu zvose zvaiva mariri.+ Sirivha nendarama nezvinhu zvemhangura nesimbi chete ndizvo zvavakaisa kupfuma yeimba yaJehovha.+ 25 Joshua akachengetedza Rakabhi pfambi iya neimba yababa vake nevanhu vose vaaiva navo vari vapenyu;+ uye achiri kugara pakati paIsraeri kusvikira nhasi,+ nokuti akavanza nhume dzakatumwa naJoshua kunosora Jeriko.+ 26 Joshua akabva aita kuti mhiko iziviswe panguva iyoyo chaiyo, achiti: “Munhu anosimuka pamberi paJehovha ovaka guta iri, iro Jeriko ngaatukwe. Ngaarasikirwe nedangwe rake paanovaka nheyo yaro, uye ngaarasikirwe negotwe rake paanomisa masuo aro.”+ 27 Naizvozvo Jehovha akava naJoshua,+ uye mukurumbira wake wakava munyika yose.+